Adventure – Family Of Films
Family Of Films
Journey to the Center of the Earth (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Journey to the Center of the Earth (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး Journey to the Center of the Earth (2008) သည် IMDb 5.8/10 Common Sense Media 3/5 Metacritic 57% Google users 90% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Eric Brevig က ရိုက်ကူးထား၍ Michael D. Weiss, Jennifer Flackett တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Family ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ပျောက်ဆုံးနေသော အစ်ကိုကို ရှာရန် တူတော်မောင်နှင့် ...
Wrath of the Titans (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Wrath of the Titans (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး Wrath of the Titans (2012) သည် IMDb 5.8/10 Google users 84% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Jonathan Liebesman က ရိုက်ကူးထား၍ Dan Mazeau, David Leslie Johnson တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Sam Worthington, Liam Neeson, Rosamund Pike တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Perseus က မြေအောက်ကမ္ဘာမှာ သူရဲ့ သား အာရက်စ် ဖမ်းခြင်းကို ခံရတဲ့ သူရဲ့အဖေကို ကယ်ဖို့ မြေအောက်ကမ္ဘာကို သွားရောက်ကာ အစ်ကို ဟေးဒီစ်က ရှေးဟောင်း တိုက်တန်တွေကို ...
Man of Steel (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Man of Steel (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Man of Steel (2013) သည် IMDb 7.1/10 Rotten Tomatoes 55% Roger Ebert ¾ Google users 90% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Zack Snyder က ရိုက်ကူးထား၍ David S. Goyer က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. စာရေးကလေး ကန့်သည် ကမ္ဘာကို ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လာသည့် ဖျက်ဆီးရေးသမားအဖွဲ့ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် သူ့ရဲ့ဖုံးဖိထားသည့် ဘဝအမှန်ကို ဖုံးကွယ်ထားလို့မရ တကယ်တိုက်ခိုက်ရမယ့်အခြေအနေကို ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ ကမ္ဘာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကယ်တင်မလဲ ...
Barfi! (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Barfi! (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး ဒီကားလေးကို ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်မိလို့ဗျာ… Barfi! (2012) သည် IMDb 8.1/10 Times of India 4/5 Rotten Tomatoes 92% Google users 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Anurag Basu က ရိုက်ကူးထား၍ Anurag Basu, Tani Basu တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ileana D'Cruz တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Adventure, Comedy, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လူငယ် သုံးဦးဟာ အချစ်ကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပုံမှန် သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်မှုကြားထဲမှာ ကန့်သတ် သတ်မှတ်လို့ မရကြောင်းနားလည်သိရှိသွားပုံကို ရိုက်ပြသွားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဗျာ… Reviewed by ...
Annihilation (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး
Annihilation (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး Review မရေးတော့ပါဘူး ကောင်းမဲ့ပုံပါ အားပေးကြပါဦးဗျာ FoF ကနေ့နှုပ်တဲ့အနေနဲ့ အများကြီးတင်ပေးမယ်နော် IDMb rating -7.5/10 Google User - 80% Rotten Tomatoes- 87% Genre -Adventure, Drama, Fantasy Run time -1h 55min Released Date -23 February 2018 (USA) Director: Alex Garland Quality :1080p.NF.WEB-DL Format : Mp4 Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source :1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG.mkv Translated By YA Zar Htun Encoded by John Burgoyne 1080p HD 450 MB (openload) 1080p HD 900 MB (openload) 1080p HD 450 MB (Google Drive) 1080p HD 900 ...
Star Wars: The Last Jedi (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Star Wars: The Last Jedi (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Review မရေးတော့ပါဘူး ကောင်းမဲ့ပုံပါ အားပေးကြပါဦးဗျာ Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (original title) IDMb rating -7.4/10 Google User - 75% Rotten Tomatoes- 90% Genre - Action, Adventure, Fantasy Run time - 2h 32min Released Date -15 December 2017 (USA) Director: Rian Johnson Quality :1080p.BluRay Format : Mp4 Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source :1080p.BluRay.x264-SPARKS. Translated By Jack Ma Ma Encoded by John Burgoyne 1080p HD 430 MB ...
Tarzan (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tarzan (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Animation ချစ်သူ တာဇံချစ်သူများအတွက် ဇာတ်ကားလေးပါ… Tarzan (2013) သည် IMDb 4.8/10 Common Sense Media 4/5 Google users 672% ရထားသော ဒါရိုက်တာ : Reinhard Klooss က ရိုက်ကူးထား၍ Reinhard Klooss, Jessica Postigo တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Kellan Lutz, Spencer Locke, Les Bubb တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Adventure, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. တာဇံနဲ့ ဂျန်းပေါ်တာတို့ဟာ တာဇံရဲ့မိဘတွေကိုလေယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံးပြီးတဲ့နောက် ကုမ္ပဏီကို လွှဲပြောင်းယူထားတဲ့သူ စီအီးအို ဂရေးစတု အင်နာဂျီစ်ရဲ့ မကောင်းကြံပြီးလွှတ်လိုက်တာ ကြေးစားစစ်တပ်ကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့အခါ ဘယ်လို စွန့်စားခန်းတွေ တွေ့ရမလဲ ...
Jackie Chan’s Who Am I? (1998) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jackie Chan's Who Am I? (1998) မြန်မာစာတန်းထိုး ဂျက်ကီချန်းချစ်သူများအတွက် ကားဟောင်းကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ… Jackie Chan's Who Am I? (1998) သည် IMDb 6.8/10 Rotten Tomatoes 63% Google users 92% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Benny Chan, Jackie Chan တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Jackie Chan, Susan Chan တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တစ်ယောက်သည် ဟယ်လီကော်ပတာပျက်ကျရာမှာ သူ့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်လေသည် သူနောက်တို့ တခြားအေဂျင်စီအဖွဲ့ပေါင်းစုံမှ လိုက်နေတဲ့အခါ ဘာကြောင့်လိုက်နေမှန်း မသိ ...
Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၉၉၆ ကာလက အဲလက်စ် ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင် လေးဟာ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းဘုတ်ပြား လေးကို ကမ်းခြေနားက ကောက်ရ ခဲ့ပေမယ့် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေပဲ ကစား ဖြစ်နေတာမို့ ဂိမ်းမကစားဖြစ်ဘဲ သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ် ညမှာ ဂျူမန်းဂျိဘုတ်ပြားထဲက ဂိမ်းတွေဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး အဲလက်စ်က ဂိမ်း စက်ဖွင့်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ သူပါပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နှစ် ၂၀ လောက်ကြာခဲ့ပြီး နောက်မှာတော့ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းစက် က ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ စပန် ဆာ၊ ဘယ်သန်နီ၊ မာသာနဲ့ ဖရစ်ဂ်ျဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လေးယောက် အခန်းထဲက အရှုပ်တွေကို ရှင်းရင်းနဲ့ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းစက်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ လက်ထဲရောက်လာတဲ့ အသစ်အဆန်းဆို စူးစမ်းချင်တဲ့ သူတို့တွေ ဂိမ်းစက်ကိုဖွင့်ဆော့ရင်း ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲ ရောက်သွားပါတော့တယ်။ဂိမ်းထဲမှာ အပြင်ကလူတွေ မဟုတ်တော့ဘဲ ...
The Expendables3(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Expendables3(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး The Expendables3(2014) သည် IMDb 6.1/10 Google users 87% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Patrick Hughes ရိုက်ကူးထား၍ Sylvester Stallone, Creighton Rothenberger တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Barney သည် သူရဲ့ သွေးသောက်အသစ်နဲ့အတူ ပူးပေါင်း၍ Conrad Stonebanks နှိပ်နှင်းရလေသည် သူရဲ့ မရှိမဖြစ် တွဲဖက်တည်ထောင်သူနဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ လက်ရုံးကုန်သွယ်ရေးသမားသည် Barney နဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်သမျှကို ရှင်းထုတ်နေတဲ့အခါ ဘယ်လို ...
The Forbidden Kingdom (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Forbidden Kingdom (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.6/10 Rotten Tomatoes 64% Common Sense Media 3/5 Google User 92 % Genre: Action, Adventure, Fantasy Run Time: 1h 44min ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး ဂျက်ကီချန်း ဂျက်လီရော ဂူးဂူးရောပါတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမို့ ကြိုက်လွန်းလို့ တင်လိုက်ပါရစေလားခင်ဗျား…… The Forbidden Kingdom (2008) သည် IMDb 6.6/10 Rotten Tomatoes 64% Common Sense Media 3/5 Google users 92% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Rob Minkoff က ရိုက်ကူးထား၍ Paco Wong က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jackie Chan, Jet Li, Michael Angarano တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော ...
Ferdinand (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ferdinand (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Ferdinand (2017) သည် IMDb 6.7/10 Rotten Tomatoes 71% Metacritic 58% Googluse User 88% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Carlos Saldanha က ရိုက်ကူးထား၍ Munro Leaf, Robert Lawson တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် John Cena, Kate McKinnon, Bobby Cannavale တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အရမ်းသဘောကောင်းလှသော ကျွဲကလေး ဖာဒီနန်ဟာ အန္တရာယ်ကြီးသော တိရိစ္ဆာန်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို အိမ်ပြန်လို့ မရဖြစ်နေသည် ထိုဖမ်းဆီးခြင်းမှာ လွတ်မြောက်ရန် ဘယ်လိုကြိုးစားစွန့်စားပြီး သူရဲ့မိသားစုဆီ ရောက်အောင် ပြန်နိုင်လား မပြန်နိုင်လားဆိုတာကတော့ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါ ...
National Treasure: Book of Secrets (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
National Treasure: Book of Secrets (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.5/10 Google User 89 % Genre: Action, Adventure, Family Run Time: 2h 4min National Treasure: Book of Secrets (2007) သည် IMDb 6.5/10 Googluse User 89% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Jon Turteltaub က ရိုက်ကူးထား၍ Marianne Wibberley, Cormac Wibberley က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Family ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Benjamin Gates သည် Abraham Lincoln ကို ...
Mythica: The Godslayer (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mythica: The Godslayer (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Mythica: The Godslayer (2016) သည် IMDb 5.3/10 Filmweb 5.8/10 Googluse User 73% ရထားသော ဒါရိုက်တာ John Lyde က ရိုက်ကူးထား၍ Jason Faller, Kynan Griffin တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Melanie Stone, Adam Johnson, Matthew Mercer တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လင်ဘုရင်ရဲ့ ဖုတ်ကောင်သည် ကမ္ဘာကို လက်စားချေဖို့ ကြိုးစားနေသဖြင့် မာရက်ခ်ခေါ်တဲ့ ကျိန်စာတိုက်ခံတဲ့ စုန်းကောင်မလေးနဲ့ သူရဲ့ သူငယ်ချင်း ဒါဂျင်တို့ဟာ ဘုရားသခင်ဆီက လက်နက်ကို ရယူရန် ကြိုးစားပြီး ကမ္ဘာကို ...
Pacific Rim (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Pacific Rim (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Pacific Rim (2013) သည် IMDb 6.9/10 Rotten Tomatoes 71% Roger Ebert 4/4 Googluse User 94% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Guillermo del Toro က ရိုက်ကူးထား၍ Travis Beacham, Guillermo del Toro တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လူသားမျိုးနွယ် နဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးပင်လယ်သတ္တဝါများကြား စစ်ပွဲ တစ်ပွဲတွင် လေယာဉ်မှူးဟောင်းနဲ့ သင်တန်းသားတစ်ယောက်တို့သည် ကမ္ဘာကြီးကို ပျက်စီးခြင်းမှာ ကာကွယ်ရန် အစွမ်းကို ကြိုးစားရင်း ...
Guardians of the Tomb (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး
Guardians of the Tomb (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး Guardians of the Tomb (2018) သည် IMDb 4.8/10 Movie Insider 4/5 Blu-ray.com 5/10 Googluse User 69% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Kimble Rendallu က ရိုက်ကူးထား၍ Gary Hamilton, Jonathan Scanlon တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Kelsey Grammer, Kellan Lutz, Bingbing Li တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ဘီစီ ၂၀၀ ရာစု တရုတ်နိုင်ငံမှာ သေချာမြုပ်နှံဆေးစိမ်ထားတဲ့ မံမီဧကရာဇ်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် နှစ် ၂၀၀၀ သက်တန်းရှိ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခု ပေါ်ထွက်တွေ့ရှိရတဲ့အခါ ဘယ်လို အက်ရှင် ...
Game of Death (1978) မြန်မာစာတန်းထိုး
Game of Death (1978) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.1/10 Rotten Tomatoes 75% Google User 87 % Genre: Action, Crime, Drama Run Time: 1h 40min ဒီဇာတ်ကားရိုက်ရင်းနဲ့ ဘရုစ်လီ တကယ်ကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အစားထိုးရိုက်ကူးခဲ့ရကာ ဘရုစ်လီချစ်သူများအတွက် ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ… Game of Death (1978) သည် IMDb 6.1/10 Rotten Tomatoes 75%Googluse User 87% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Robert Clouse, Bruce Lee တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Robert Clouse က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Bruce Lee, Gig Young, Colleen Camp တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ...
Thor: Ragnarok (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Thor: Ragnarok (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Thor: Ragnarok (2017) သည် IMDb 8/10 Rotten Tomatoes 92% Filmweb 7.9/10 Googluse User 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Taika Waititi က ရိုက်ကူးထား၍ Eric Pearson, Craig Kyle တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Thor ကို စကြာဝဠာရဲ့ တခြားတစ်ဖက်မှာ အကျဉ်းချခံထားရပြီး သူဟာ Asgard ကို ပြန်သွားပြီး Ragnarok ကို ရပ်တန့်ရမယ် တာဝန်ရှိနေသည်ကို သိသွားလေသည် သူရဲ့ မိခင်ကမ္ဘာပျက်ဆီးခြင်းနဲ့ Asgardian ...
The Way of the Dragon (1972) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Way of the Dragon (1972) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.3/10 Rotten Tomatoes 100% Google User 86 % Genre: Action, Adventure, Crime Run Time: 1 hour 30 mins တစ်ခေတ်တစ်ခါ ကွန်ဖူးလောကရဲ့ ဘုရင် ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က အသေအလဲ ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ဘရုစ်လီရဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကို fof ရဲ့ ကား ၅၀၀ အဖြစ်တင်လိုက်ပါရစေလားခင်ဗျာ…. The Way of the Dragon (1972) သည် IMDb 7.3/10 Rotten Tomatoes 100% Googluse User 86% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Bruce Lee ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Bruce Lee, Chuck Norris, Nora Miao တို့ ...
Once UponaTime in China II (1992) မြန်မာစာတန်းထိုး
Once UponaTime in China II (1992) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.5/10 Rotten Tomatoes 93% Google User 83 % Genre: Action, Adventure, Biography Run Time: 1 hour 53 mins Once UponaTime in China II (1992) သည် IMDb 7.5/10 Rotten Tomatoes 93% Googluse User 83% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Hark Tsui ရိုက်ကူးထား၍ : Tin-suen Chan, Tan Cheung တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် : Jet Li, Rosamund Kwan, Siu ...
Once UponaTime in China (1991) မြန်မာစာတန်းထိုး
Once UponaTime in China (1991) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.4/10 Rotten Tomatoes 88% Google User 88 % Genre: Action, Adventure, Biography Run Time:2hours 14 mins Once UponaTime in China (1991) သည် IMDb 7.4/10 Rotten Tomatoes 88%Google users 88% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Hark Tsui ရိုက်ကူးထား၍ Yiu-ming Leung, Elsa Tang တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jet Li, Rosamund Kwan, Biao Yuen တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, ...
Once UponaTime in China III (1993) မြန်မာစာတန်းထိုး
Once UponaTime in China III (1993) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.8/10 Rotten Tomatoes 63% Google User 84 % Genre: Action, Adventure, Biography Run Time: 1 hour 49 mins Once UponaTime in China III (1993) သည် IMDb 6.8/10 Rotten Tomatoes 63% Google users 84% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Hark Tsui ရိုက်ကူးထား၍ Tin-suen Chan, Tan Cheung တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jet Li, Rosamund Kwan, Siu Chung Mok ...
Thelma & Louise (1991) မြန်မာစာတန်းထိုး
Thelma & Louise (1991) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.4/10 Rotten Tomatoes 84% Metacritic 88% Google User 83 % Genre: Adventure, Crime, Drama Run Time:2hours 10 mins Thelma & Louise (1991) သည် IMDb 7.4/10 Rotten Tomatoes 84% Metacritic 88% Google users 83% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Ridley Scott ရိုက်ကူးထား၍ Callie Khouri က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Adventure, Crime, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ...
9 (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
9 (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.1/10 Rotten Tomatoes 57% Filmweb 7.4/10 Google User 54 % Genre: Animation, Action, Adventure Run Time: 1 hour 19 mins9(2009) သည် IMDb 7.1/10 Rotten Tomatoes 57% Filmweb7.4/10 Google users 54 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Shane Acker ရိုက်ကူးထား၍ Pamela Pettler, Shane Acker တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Elijah Wood, Jennifer Connelly, Crispin Glover တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Action, Adventure ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အရုပ်လူသားလေးတစ်ဦးဟာ အနာဂတ်ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် နိုးထလာတဲ့အခါ သူသည် ...
Tiger Zinda Hai (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tiger Zinda Hai (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.5/10 Rotten Tomatoes 67% Google User 86 % Genre: Action, Adventure, Thriller Run Time: 2h 41min TZH ဇာတ်လမ်းဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က အီရတ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံပြီး ဇာတ်ညွှန်းရေးထားပေမဲ့ ထပ်တူတူညီမူတော့ မရှိပဲ အများကြီး ကွဲပြားပါတယ်။ ၂၀၁၄ ဇွန်လမှာ ISIS အဖွဲ့ ဟာ သူတို့ ရုံးစိုက်ရာမြို့မိုဆူးလ်မြို့ အနီးမှာရှိတဲ့ အီရတ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Tikrit ဆိုတဲ့ ဒေသကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Tikrit မြို့ ဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသူ Nurse ၄၆ ဦးဟာ ISIS လက်အောက်မှာ ၂၃ ရက်ကြာ ဓါးစားခံအဖြစ် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာ အိန္ဒိယအစိုးရ ...
Jodhaa Akbar (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jodhaa Akbar (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.6/10 Rotten Tomatoes 79% Filmweb 7.7/10 Google User 88 % Genre: Action, Adventure, Biography Run Time:3hours 33 mins Jodhaa Akbar (2008) သည် IMDb 7.6 Rotten Tomatoes 79% Filmweb 7.7/10 Google User 88% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Ashutosh Gowariker ရိုက်ကူးထားပြီး Haidar Ali , Haidar Ali တို့က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Hrithik Roshan, Aishwarya Rai Bachchan, Sonu Sood တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Biography ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. မဟာမိတ်အချင်းချင်း လက်ထပ်ရမှာ ပေါက်ပွားလာသော ဆယ့်ခြောက်ရာစုနှစ် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဟာ မွန်ဂိုအင်ပါယာရဲ့ ဘုရင် ဧကရာဇ် အက္ကဘာ နဲ့ ရာ့ဂျပ်ပွတ် မင်းသမီးလေး ဂျို့ဒ်ဟာတို့ရဲ့ ကြားက ...
The Lost City of Z (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Lost City of Z (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး The Lost City of Z (2016) သည် Rotten Tomatoes 87% IMDb 6.6 Metacritic 78% Google users 76% ရထားသော ဒါရိုက်တာ James Gray ရိုက်ကူးထား၍ James Gray, David Grann တို့က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Adventure, Biography, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ၁၉၉၀ နှစ်များက အမေဇုံတောထဲက ထူးဆန်းတဲ့မျို့ကို ရှာဖွေစဉ်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဗြိတိသျှ စူးစမ်းရှာဖွေသူ Col. Percival ...
Eragon (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး Eragon (2006) သည် IMDb 5.1 FilmWeb 5.3/10Goggle USers 76 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Stefen Fangmeier ရိုက်ကူးထား၍ Peter Buchman (screenplay), Christopher Paolini တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Taraji Ed Speleers, Sienna Guillory, Jeremy Irons တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Family ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လယ်သမားကောင်လေးတစ်ယောက်သည် သူရဲ့ အမိမြေ အယ်ဂျေးလ်စီးယားမှာ နဂါးဥတစ်လုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလေရာ ထိုဥသည် သူရဲ့အိမ်ကို ရန်မူမယ့် မကောင်းဆိုးဝါးဘုရင်ကို ကာကွယ်နောက်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့အခါ ဘယ်လို အက်ရှင်စွန့်စားခန်းကောင်းတွေ တွေ့ရမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြပါခင်ဗျာ…. Review By Win ...
Unknown (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Unknown (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.9/10 Rotten Tomatoes 55% Google User 79 % Genre: Action, Adventure, Comedy Run Time: 1 hour 50 mins Unknown (2011) သည် IMDb 6.9 Rotten Tomatoes 55% Goggle USers 79% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Jaume Collet-Serra က ရိုက်ကူးထားကာ Oliver Butcher (screenplay), Stephen Cornwell (screenplay) တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားသရုပ်ဆောင် Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Mystery, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုးမားရောဂါကနေ နိုးထလာသောအခါ လူတစ်ယောက်က သူရဲ့နေရာကို ယူထားတာကိုတွေ့လိုက်ရသည် ...
ကျွန်​​တော်​တို့ Family Of Flims Page က​နေ ရုပ်​ရှင်​ချစ်​ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက
်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်းများကို စာတန်းထိုး​ကောင်း​ကောင်းနဲ့တင်​ဆက်​​ပေးလျက်​ရှိပါတယ်
မိတ်​​ဆွေတို့မှာလည်း ပရိတ်​သတ်​ကြီးကို ကိုယ့်​ဘာသာပြန်​ထားတဲ့ရုပ်​ရှင်​​လေး​တွေကိုကြည့်​​စေချင်​တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်​ဆိုရင်​
ကျွန်​​တော်​တို့ pageက​နေလက်​တွဲ​ခေါ်ပါရ​စေ ရုပ်​ရှင်​ကားများကိုဘာသာပြန်​လိုပါက
Translator ဖြစ်​လိုပါက Chat Box ကိုကြွလှမ်းခဲ့ကြပါခင်​ဗျာ ….
ကျွန်​​တော်​တို့ pageက​နေ ရုပ်​ရှင်​ချစ်​ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်းများကို စာတန်းထိုး​ကောင်း​ကောင်းနဲ့တင်​ဆက်​​ပေးလျက်​ရှိပါတယ်​
မိတ်​​ဆွေတို့မှာလည်း ပရိတ်​သတ်​ကြီးကို ကိုယ့်​ဘာသာပြန်​ထားတဲ့ရုပ်​ရှင်​​လေး​တွေကိုကြည့်​​စေချင်​တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်​ဆိုရင်​ ကျွန်​​တော်​တို့ pageက​နေလက်​တွဲ​ခေါ်ပါရ​စေ
ရုပ်​ရှင်​ကားများကိုဘာသာပြန်​လိုပါက E-skill အသင့်​အတင့်​ရှိရန်​လိုပါသည်​
Family Of Films © 2018